Inona na iza no manakana ny fivoarana tsara? | safidy
ny Helmut Melzer 1. Oktobra 2019, 14: 40 9.5k Views
Manohy ny fanontanianao ianao ny lohahevitra ifantohana araka ny hevitrao. Ireo fanambarana tsara indrindra (ny fanafihana 250-700) dia havoaka ihany koa amin'ny famoahana ny pirinty an-tsoratry ny safidy - manampy amin'ny dobo vahaolana ho an'ny ho avy mamirapiratra.
Mora izany: Midira ao amin'ny safidy ary aleo ambanin'ity pejy ity.
Ny fanontaniana misy ankehitriny:
"Inona na iza no manakana ny fivoarana tsara?"
#1 Opportunism, tahotra & fitsiriritana
Amin'ny sehatra maro dia saika tsy hazava kokoa izay tokony hatao. Na izany na tsy izany aza dia manao politika, mifanohitra amin'izay ny antony rehetra ary ny soa iraisana rehetra. Inona no manosika andraikitra mandatsa-bato voafidy hanohitra ny asany notendrena? Politika hitazona ny fahefana. Clientelism. Izy roa ireo dia azo lazaina fa fotoana maharikoriko ihany.
Ary inona koa no mahatonga ny mpifidy hanapa-kevitra manoloana ireny "solontenan'ny vahoaka" ireny? Matahotra ny fiovana. Matahotra ny fahaverezan'ny tena manokana. Saika mamela heloka sahady.
Fa ny tena miaro tena aza dia ireo izay mahazo tombony tsy mitsaha-mitombo amin'ny hafa - olombelona, ​​biby ary natiora. Ireo orinasam-barotra sy mpandraharaha ireo, izay tsy mampiseho andraikitra ary manangona harena noho ny fitiavan-tena madio - amin'ny volan'ny besinimaro. Ireo izay manam-bola amin'ity lalao malotaka ity aloha dia mitazona izany.Raha mahalala olona eto ianao, dia lazao am-pitoniana. Ary amin'ny fomba: na ny fialantsiny amin'ny mpanaraka azy "Izany ihany no asako" dia tsy manan-kery intsony.Helmut Melzer, safidy
nampian'i Helmut Melzer 1. Oktobra 2019, 14: 42
#2 Gazety ny fahalalahana ao anaty alahelo
Heveriko fa matetika ny tahotra izay manakana antsika. Ny tahotra ny fiovan'ny per se sy ny tahotra ateraky ny politika na ny fandrahonana tena izy. Vao tsy ela akory izay dia nanjary nampahibemaso fa nivadika tamin'ny lafiny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety i Aotrisy. Nosokajiana ho "tsara" izy io, fa "ampy" fotsiny. Ny mpanao gazety ao Aotrisy dia voatafika amin'ny FPÖ indrindra. Eo an-toerana ihany koa, miverina ny fampivoarana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Mampatahotra ahy manokana izany ary mampihena hevitra maro. Afaka manoratra an'izany ve aho? Ahoana raha te handeha any Tiorkia aho? Raiso ny karatra fanontana gazety na avelao any an-trano? Miaro antsika ny tahotra. Fa ny tahotra koa misakana. Izany no antony, raha ny hevitro, fiarahamonim-pirenena mailo dia zava-dehibe ary mandray izay fandraisana andraikitra rehetra ho an'ny kabary misokatra sy mitsikera.
Karin Bornett, mpanao gazety mahaleo tena
#3 Ny fiaraha-monina dia misara-kevitra
Ny sakana lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny fampidirana dia ny politika tahaka izao. Ny fifandraisan-davitra dia manana fifehezana tanteraka, izay mampiseho antsika irery ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mpisolovava. Ny pittance ho an'ny olona mikatsaka fialokalofana izay te hiditra. Ny fampihenana ny alim-pianakaviana ho an'ireo mpandray vola ambany indrindra. Tsikaritray fa ny fiaraha-monina eto dia misara-bazana ary ny tahotra tsy mivaona no arotsaka. Misy fanamby maika, toy ny fampidirana ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ny tsenan'ny asa, fanavaozana ny politikam-pianarana, fikarakarana, trano ... Mino izahay fa ny fahasamihafana dia mandroso amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana - fanatanjahantena, zavakanto ary kolontsaina, teknolojia, toekarena, sehatry ny fikarakarana. ... Te hifanatona isika miaraka amin'ny tanana ahinjitra fa tsy amin'ny ankavia. Mihevitra ny zon'olombelona ho soatoavina iraisana isika ary manolo-tena hanao izany araka ny herinay rehetra. Ao anatin'izany no andraikitry ny fampidirana, ary mihatra amin'ny fahatongavan'ilay olona na ny mponina.
Sarah Kotopulos, Zon'olombelona SOS
nampian'i Helmut Melzer 1. Oktobra 2019, 14: 43
#4 Tantanan-javatra manimba ny toetrandro
"Mikorontana ny fahavoazana ny toetr'andro - tsy misy zavatra maika azo atao ankehitriny. Ary efa mihamailama ny famantaranandro, dia taona vitsivitsy sisa tavela isika. Ny fifanolanana hetra miady ara-boajanahary toy ny an'ny indostrian'ny fiaramanidina na ny solika solika dia tsy azo hamarinina intsony - ary mbola voafehin'ny rafitry ny hetra ihany koa izy ireo ary nahomby tamin'ny sehatry ny lakolosy hatramin'izao.
Fihetsiketsehana ny fiarahamonim-pirenena, ny politika dia aleony mitady fomba hafa - na ny fikendrena ny toetr'andro aza no nokendrena tamina hetsika tsy matotra toy ny «Tempo 140» sy ny Co. Ary dia ny fivoahan'ny CO 2 amin'ny sehatry ny fitaterana dia "mihetsika hatrany" fa tsy milentika. Na izany aza, tsy maintsy fantatsika farany fa ny fikarohana momba ny toetrandro, fikambanan'ny tontolo iainana ary tanora an'arivony izay nanao fihetsiketsehana nandritra ny volana maro momba ny ho aviny dia mety: Raha ny olana momba ny toetr'andro dia misy safidy roa fotsiny: 'ny fihetsika' na ny tsy fanaovana. Tsy misy zavatra - na kely loatra - mba atao, dia mitarika antsika amin'ny lalana mivantana mankany amin'ny loza mihatra amin'ny toetr'andro. Ny famatsiana ara-tontolo iainana manimba ny tontolo iainana dia noho izany dia tokony ho rava ny tanjon'ny toetr'andro ary ny tanjon'ny toetr'andro sy ny angovo dia tokony hojerena ara-drafitra miaraka amin'ny hetra CO-2 tsy mandray anjara amin'ny vola miditra. "
Franz Maier, Filohan'ny Fikambanana Tontolo Iainana
#5 Resaka fa tsy mihetsika
Raha mijery ny angovo ny rivotra dia lasa mazava ny zavatra iray: ny fifanarahana ny mponina amin'ny angovo dia mandeha amin'ny fotoana rehetra, 200 efa voaomana ara-drivotra efa niandry nandritra ny taona maro hamoahana ny famatsiam-bola, mba hahafahan'ny trano fiompiana rivotra. Saingy mbola sarotra amin'ny resaka politika ny resaka politika. Ny zava-misy dia eo amin'ny latabatra, fotoana tokony hametrahana.
Martin Jaksch-Fliegenschnee, Windkraft Interessengemeinschaft - IGW
nampian'i Helmut Melzer 1. Oktobra 2019, 14: 45
#6 Ny fananganana
Ny fananganana, izany hoe ireo izay mahazo tombony amin'ny sata miorina na mitohy amin'ity lafiny ity.
Markus Murlasits amin'ny alàlan'ny Facebook
#7 Aza mijanona amin'ny fombanao
Mazava ho azy fa afaka mangataka eto ianao hanome tsiny ny "mpilalao lehibe", ary marina ny anao. Raha jerena fa mbola tsy misy fiara matanjaka misy hydrogen eo an-tsena hividy, na dia efa matotra aza ny teknolojia. Betsaka kokoa ny misakana ny fivoarana tsara na misy fanambarana toy ny "... fa efa izany foana", "... tsy mieritreritra aho fa miasa". Tsy vitan'ny hoe mampihena ny ainao ihany izany fa ny tontolo iainanao koa. Ny hevitra vaovao dia mila fampaherezana sy rivotra hahazoana mitombo ary ho lasa tetikasa lehibe. Raha ny hevitro dia tratrarina ihany koa ny fivoarana tsara miaraka amina toe-tsaina tsara sy fisokafana - tsy mijanona amin'ny fombanao fotsiny.
Magdalena Kessler, Hotel Hotel Chesa Valisa
nampian'i Helmut Melzer 1. Oktobra 2019, 14: 44
#8 Manintona sy mampihetsi-po tafahoatra
"Ny fitomboan'ny fampahalalana isan'andro" izay mitsikera amintsika "dia tsy mitsaha-mitombo. Izany matetika dia mitarika amin'ny fikorontanana sy ny fahatsapana ho miasa loatra. Ny fahatsapana tsy afaka miova amin'ny maha-olon-tokana ny fanjakana eto amin'ity tontolo ity dia mamaky foana isika, izay ampahafantarina antsika, horonan-tsary, rohy, lahatsoratra, na sioka. Ity fahatsapana ity dia raha ny hevitro dia iray amin'ireo prasy hiova tsara. Koa satria maro ny olona no mieritreritra hoe "Ratsy daholo izany, tsy afaka manova izany irery aho, ka tsy maninona na inona na inona ny zava-drehetra."
Saingy tsy tokony hifantoka amin'izany fanentanana izany isika, fa mifanohitra amin'izany: izao tontolo izao dia lasa be hiaina kokoa, araka ny azontsika an-tsaina. Isika rehetra no mamaritra ny hoavintsika miaraka, tsy misy apetraka, manana safidy foana isika. Na amin'ny fivarotana andavan'andro, izay anaovako misafidy entana avy amin'ny fambolena maharitra, na ho an'ny fividianana vidiny avo indrindra, fa ambonin'izany rehetra izany dia olona politika mandà ny fahasosorana handray anjara amin'ny fifidianana, na koa mavitrika amin'ny demaokratika Mandray anjara amin'ny dingana fandraisana fanapahan-kevitra. Isika tsirairay avy dia afaka manohana ireo mpanao politika izay manolo-tena amin'ny fomba fiaina maharitra, afaka misafidy ireo izay manohana hevitra tsara sy maro hafa. Ny mety ho fidirana mivaingana amin'ny fandraisana anjara dia eo amin'ny 26.Mai: Misy ny fifidianana Eropeana. Ny antso nataoko: Makà fahalalana sy mifidy, satria ny tetik'asa eoropeana dia manan-danja kokoa noho ny teo aloha. "
Hartwig Kirner, Aotrisy Australiana
#9 Fikajiana: lalàna hafa 27
Ny fatiantoka haingana dia misy loza manimba ny natiora sy isika olombelona. Izany no antony ilantsika politikam-panoloran-tena miaraka amin'ny fepetra mahomby amin'ny ambaratonga rehetra: avy amin'ny EU, amin'ny alàlan'ny governemanta federaly sy fanjakana ary ny fanodikodinana ny tsirairay avy amintsika, mila mandray andraikitra ny rehetra. Noho izany dia fotoana tsara ny hananganana lalànan'ny fiarovana miaro ny natiora any Aotrisy izay tsy mitsahatra mifanohitra amin'ny fahaverezan'ny karazana. Amin'izao fotoana izao, ny fikajiana ny natiora dia fehezin'ny fanjakana federaly sivy momba ny fiarovana ny natiora, ny fihazana ary ny jono. Ireo no lalàna isan-karazany 27 ka matetika dia tsy mahavita mamorona rafitra tsara amina faritra somary lava. Satria tsy manam-petra ny natiora ary tsy maintsy mitovy ny fiarovana azy!
Dagmar Breschar, Union Conservation Union
nampian'i Helmut Melzer 1. Oktobra 2019, 14: 49
#10 Ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fisian'ny herim-po
Ny vahaolana ho an'ny ho avy dia tsy maintsy hoheverina hatramin'ny farany. Midika izany fa tsy misy fotsiny ny zavatra sasany amin'ny ho avy. Ny tsy manaiky an'io dia tsy hita amin'izao fotoana izao. Ny krizy momba ny toetr'andro fa koa ny revolisiona ara-teknolojika (famadihana angovo, fanodinana, ny fanetsiketsehana) dia mitaky hetsika tsy tapaka ataon'i Eropa. Ny motera famoronana fôsily, solika fôsily ary angovo nokleary dia tsy ao anatin'ny vahaolana amin'ny krizy momba ny toetr'andro sy ny revolisiona amin'ny teknolojia. Noho izany, iray ihany ny fomba iray amin'ireto teknolojia ireto: mila mivoaka haingana araka izay azo atao isika. METY midika fa tsy orinasa amin'ny ho avy ny orinasa sasany miaraka amin'ny modely orinasa misy azy ireo raha tsy hoe manantitrantitra ny tenany izy ireo. Ny vokatr'izany dia midika fa ny politika dia mametraka ny rafi-panamboarana mba ahafahana manatanteraka izany ary tsy ny hanankarena ireo orinasa ireo.
Florian Maringer, Angovo azo havaozina
nampian'i Helmut Melzer 1. Oktobra 2019, 14: 50
#11 Miankina amin'ny zoro
Ny rafitra politika, izay mieritreritra ao anatin'ny taona ara-bola sy tsara indrindra amin'ny fotoam-pifidianana, dia manakana ny fanapahan-kevitra maharitra. Ny rafitra ara-toekarena izay mitaky tarehimarika isan-taona avy amin'ireo mpilalao lehibe handanjalanja ny karama mpanatanteraka sy ny vidin'ny tahiry, miaraka amin'ny fizarana vola, dia mahomby amin'ny faharetana. Ny fitsipika ara-bola tsy natao hikarakarana ny fahasalaman'ny biby sy ny fikajiana ny natiora, fa amin'ny fikatsahana fahombiazana dia hisorohana ny famerenana indray ny famokarana sakafo. Fa koa: tsy fitovian-kevitra sy tsy fahampiana, izay manome fampiononana sy fitahirizana fotoana amin'ny fihetsiketsehana avy amin'ny fiarovana ny toetrandro, ny fanjifana tsy hay lazaina ...
Wilfried Knorr, mpitondra tenin'ny toekarena mahasoa iraisana
nampian'i Helmut Melzer 1. Oktobra 2019, 14: 46
#12 Matetika isika no misakana ny tenantsika
Namako karatra ny naman'ny namako iray nilaza hoe: "Nilaza foana ny rehetra fa tsy mety raha tsy tonga dia tonga ny olona tsy mahalala izay ary nanao izany fotsiny!"
Mieritreritra aho fa matetika no manakana ny tenantsika tsy hanana fivoarana tsara. Fa mila manao fanovana isika, manaova fanajana fombafomba, fomba ary fomba fisainana. Mandritra izany fotoana izany dia miaritra ny fanaintainana sy ny alahelo, mandra-pahatongan'ny fomba vaovao ao amin'ny atidohantsika sy ny fihetseham-pontsika. Ny tahotra kely dia miaro antsika amin'ny dingana haingana, ny tahotra loatra dia mamela antsika eo amin'ny tany. Mila herim-po sy fahatokisan-tena ny fampandrosoana, ny faniriana hisidina ary misaina ampy mba hipetrahana tsara sy mandroso.
Martina Kronthaler, Life Life
Previous article IT Maharitra IT - mety ve izany?!?
Lahatsoratra manaraka Afo ala ao Amazona: fanontaniana 10 ho an'i Oliver Salge | Greenpeace Germany
Afo ala ao Amazona: fanontaniana 10 ho an'i Oliver Salge | Greenpeace Germany